Wararka Maanta: Jimco, July 30, 2021-Madaxweynaha Jubbaland oo ka hadlay qaraxii galabta lala beegsaday dhalinyaradii Ciyaartoyda ahaa
Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa sidoo kale ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed iney u midoobaan argagixisada caadeysatay gumaadka hal doorka dalka, sida uu hadalka u dhigay.
"Waxaan uga tacsiyaynayaa dhamaan bahda Ciyaaraha Jubaland qaraxii maanta Argagixisadu la beegsatay baska kooxda kubada Cagta JCCI, halkaas oo ay ku geeriyoodeen Sadex kamid ah ciyaartooyda kooxda qaar kalana ay ku dhaawacmeen.Waxaan Alle uga baryayaa in uu janadii fardowso ka waraabiyo dhalinyaradaas aan waxba galabsan ee Argagixisadu ay dhiigooda banaysatay, waxaa kale oo aan Alle Caafimaad taam ah uga baryayaa inuu siiyo inta dhaawaca ah. Al-Shabaab waxaa ka go’an inay beegsadaan qof walba iyagoo si badheedh ah u beegsanaya dadka waxgalka ah sida Dhalinyarada,Aqoonyahanka iyo indhaha bulshada taas oo cadaynaysa inay si guud indhaha uga ridayaan ummada Soomaaliyeed" ayuu yiri Axmed Madoobe.
Waxaa sido kale qaraxa galabta lagu dilay dhalinyarada Ciyaartoyda ah ka tacsiydeeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Raysal wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa sidoo kale ka tacsiyadeeyay qaraxii galabta lala eegtay dhalinyarada Ciyaartoyda ahaa.
"Waxaan si adag u cambaareynayaa qaraxii argagixisadu galabta la beegsadeen dhallinyaro ciyaartoy ah magaalada Kismaayo. Waxaan tacsi u dirayaa ehelada dadkii ku geeriyooday falkaas arxan darrada leh, maamulka iyo shacabka Jubaland, anigoo dhaawacyadana Eebbe uga baryaya in ay dhaqso u bogsoodaan. Falalka naf la caariga ah ee argagixisadu waa in aysan naga horjoogsan hiigsigeenna nabad iyo dowlad-dhiska, gaar ahaan xilligan dalku doorashada galay" ayuu yiri Raysal wasaare Rooble.
Gabagabadii xaalada Kismaayo ayaa caawa ah mid laga dareemayo jawi kacsanaan ah oo dadka ayaa wali ka murgeysan qaraxii galabta ka dhacay magaalada kismaayo, waxaana wararkii ugu dambeeyay caawa ay sheegayaan in magaalada lagu soo rogay Bandow.